Nezvedu - Kennede Electronics Mfg Co,. Ltd.
Yakavambwa kubva 2000 kusvika 2021
inova inyanzvi yekugadzira uye inotengesera kunze inobatanidza dhizaini, kusimudzira uye kugadzirwa kwehunyanzvi mune mafeni, rechargeable mwenje zvigadzirwa uye keteni dzemagetsi. Isu takanyoreswa zviri pamutemo paShenzhen Stock Exchange muna Kubvumbi 2014, neStock Code 002723.
KENNEDE inogara muguta reJiangmen, mudunhu reGuangdong, inosvika 220,000 square metres, uye ine vashandi vanopfuura zviuru mazana maviri vanosanganisira makumi manomwe mainjiniya nevatengesi makumi mana.
Zvese zvigadzirwa zveKENNEDE zvinoenderana nemhando dzepasi rose uye zvinofarirwa zvakanyanya mumisika dzakasiyana siyana pasirese, nyika dzinopfuura zana dzinofukidza America, Europe, Asia neAfrica.
Kuburikidza neanopfuura makore makumi maviri ebudiriro, KENNEDE ine zviri pachena zvemakwikwi zvakanakira. Isu tinonamatira kubudiriro yehunyanzvi, uye ticharamba tichigadzira misika yemumba neyepasirese.
isu tiri bhizinesi rekushandisa pamba rinobatanidza r&d, kugadzira, kutengesa uye kuzvitsigira kupinza uye kutumira kunze kwenyika. Gore rega rega, isu tinopa zvigadzirwa uye masevhisi anogutsa kune vanopfuura mamirioni mazana matatu evashandisi pasi rese, pamwe nevatengi vakakosha uye vanodyidzana vanobatana mundima dzakasiyana, uye kuyedza kugadzira hupenyu hune hutano uye hwakasununguka. Bhizinesi redu rinonyanya kutarisana nemidziyo yakangwara yemumba, mwenje wakangwara, kuchenesa mweya uye marudzi ese emidziyo midiki yemumba. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanaka munyika dzinopfuura 120 nematunhu pasirese. Panguva imwecheteyo, takagadzira hukama hwekubatana kwenguva refu ne wal-mart, Amazon, Disney, CNPC, China Railway Group, China Construction Bank, International Red Cross, Miniso uye mamwe mabhureki / masangano. Zvigadzirwa zveKennede zvakagara zvakachengetedza hunyanzvi hwayo hwakasiyana uye hutungamiriri muindasitiri.